:Bọchị: Disemba 31, 2019
Esgwọ ụgbọ njem Bursa Ọha! E wepụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ n'iwu ọhụrụ gbasara ọnụ ahịa ụgbọ njem ọha na Bursa na 1 Jenụwarị 2020. N'ihi ya, afọ 4 gara aga, 1,5 TL etinyere aka na ụmụ akwụkwọ [More ...]
Metrogbọ njem ụgbọelu Istanbul ji ihe ruru narị nde asaa
Metrogbọ njem ụgbọ elu Istanbul ji ihe ruru nde 700; Rozọ a, bụ nke ahọrọre maka njem ngwa ngwa na nke dị mma, nyere ndị bi na Istanbul aka na ọsọ zuru oke na 2019. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem 700 na afọ ahụ [More ...]
TÜDEMSAŞ GCC Nzukọ Held
Emere Nzukọ Nzukọ Ọchịchị na 2019 maka ndị ọrụ nke TÜDEMSAŞ General Directorate ma mezie ihe ndị achọrọ. Na nnọkọ a na-eme na Tọzdee, Disemba 26, 2019, arịrịọ na ntinye nke ndị ọrụ TÜDEMSAŞ, Memur-Sen [More ...]
Ozi Afọ Ọhụrụ sitere na Turhan, Onye Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa
Ọ na-eme ememme afọ ọhụrụ nke mba anyị, mba anyị hụrụ n'anya na mmadụ niile. Achọrọ m ka 2020 bụrụ afọ nke ịtụ anya bawanye, udo nwekwuru ụwa niile, yana mmetụta nke ọbụbụenyi, nwanne na ịdị n'otu nwetara ume. Afọ Ọhụrụ, [More ...]
A ga-edobe ntọala nke okporo ụzọ abụọ na Kayseri na 2020
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Memduh Büyükkılıç, 2020 ga-abụ otu n'ime afọ iji gosi ọdịnihu Kayseri, o kwuru. Onye isi ala Büyükkılıç, Kayseri, ọ bụghị naanị maka ọdịnihu nke taa dị ezigbo mkpa maka ọrụ ahụ [More ...]
TCDD General Manager Yazıcı Ozi Afọ Ọhụrụ
Dịka TCDD General Directorate nke ationgbọ njem, anyị ahapụla afọ ọzọ ebe anyị na-enye ụmụ amaala anyị a na-akwanyere ùgwù ọrụ na-arụ ọrụ ọhụụ na nke kachasị elu. The akụkụ kasị mkpa nke ụwa nke oge a karịsịa na ụgbọ okporo ígwè oru nke aha ịrịba rụzuru na Turkey [More ...]
Marmaray ga-eje ozi ruo Oge Afọ Ọhụrụ
Iji mezuo ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị njem n'ihi Afọ Ọhụrụ, ụgbọ okporo ígwè Marmaray ga-arụ ọrụ ruo mgbe elekere 02.00 na Afọ Ọhụrụ. A ga-agba ụgbọ oloko Marmaray n’agbata ọdụ ụgbọ ala Zeytinburnu-Söğütlüçeşme na December 31, na nkeji iri na ise. [More ...]
Bungalows na Çambaşı Doğa Ihe Njikere Maka Oge
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Mehmet Hilmi Güler na-etinye ego ndị dị mkpa na Ordu iji nwee ike ịnweta njem nlegharị anya na afọ na ọkachasị iji tigharịa njem nlegharị anya oge oyi na Ordu Ordu ọ bụghị ọnwa 3 kama ọ bụ ọnwa iri na abụọ na Ordu. [More ...]
European Side Metrobus Stations na Mapbus: You nwere ike ịhụ nkwụsị Metrobus niile na otu maapụ, nke bụ ọdụ ụgbọ ala kacha nso ebe ị na-aga na njedebe metrobus nke ebe ị na-aga. [More ...]
Nwee Obi intọ na Ordu Highlands
Onye isi obodo nke Ordu Obodo Ndị agha Ordu nke Mehmet Hilmi Güler abụghị ọnwa iri na abụọ kama ọnwa iri na abụọ ”na-amata. Iji nweta oge udu mmiri na Ordu, Obodo ukwu, Akkuş [More ...]
ANTRAY na Bgbọala Obodo na-akwụghị ụgwọ ruo ụbọchị Afọ Ọhụrụ
Transportationgbọ njem n'efu na Afọ Ọhụrụ. Onyinye Afọ Ọhụrụ nke Antalya Mayor Muhittin Böcek nye ndị bi na Antalya. Plategbọ ala ndị gọọmentị na-ahụ maka ndị isi obodo na ANTRAY ga-enyere ụmụ amaala ahụ aka n'efu ruo ụbọchị Afọ Ọhụrụ. [More ...]
Ndị njem Akçaray ga-aga n’ihu ruo elekere 02.00 Tonight
Ationgbọ njem, onye enyemaka nke Kocaeli Obodo ukwu, mara ọkwa na Akçaray ga-arụ ọrụ ruo mgbe elekere 02.00 na Afọ Ọhụrụ. Akçaray'ın ụbọchị mbụ nke afọ na Jenụwarị 1, 2020 na 02.00:30 ruo mgbe nkeji iri atọ na nkeji iri atọ [More ...]
Mayorzmir Mayor Tunç Soyer malitere ụbọchị ikpeazụ nke afọ site na iji ụgbọ njem ọha. Soyer nyere ndị njem 18 nde 1 ahụ nọ n'ụgbọ mmiri ahụ na onye ọkwọ ụgbọala nde XNUMX nke ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ. Izmir [More ...]
Afọ 2019 bụ Afọ nyocha nke İzmir
Ndi isi obodo Izmir tinyere ulo ijeri $ 2019 na 3,3. Pasent 41 nke ego ha nwetara na ego a na-enweta n’otu obodo ejiriwo pasent 16 rịa elu ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Obodo Izmir, [More ...]